Honohono ‘ty zalahy mahafaty tahaka ny honahona e - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ratalata Jean Ba il y a 5 années
Maro ireo lohadinika tokony hifanakalozana amin’izao tonon-taona izao. Eo ohatra ny kolontsaintsika. Nifampiarahaba isika fa tratry ny asaramanitra. Dia hoy aho hoe : “aiza izay fandroana eo ?” Ho an’izay manadino dia ny fotoan’ny fandroana tamin’ny fomba tany malagasy (fahiny) no antsoina asaramanitra.
Isan’ny ifanakalozana ihany koa dia ny fomba fiarahabana. “Tratry ny taona” sa “Nahatratra ny taona” no izy e ? Mampahatsiahy ilay devoara-ko tany antsekoly izy ity : “Vivre pour manger ou manger pour vivre ?” Dia raikitra ny ady hevitra. Hoy ny ankilany “raha tratry ny taona isika dia midika izany fa isika tsy mihetsika fa ilay taona no mandeha”. Ka moa va tsy izay no izy rehefa miteny isika fa mandeha izany andro izany ? Ny andaniny indray manao hoe : “Nahatratra ny taona isika satria isika no mandeha isika no mifehy ny fotoantsika”. Ka moa va tsy izay tokoa ilay izy rehefa manenjika “record” ireo atleta amin’ny atletisma ? Tsy honohono ity resaka ity fa tena niteraka dinidinika ary toa nampifanditra aza tamin’ny toerana sasany. Diniho tsara hoy ny iray fa efa mifangaro ao antsaintsika ny maha-malagasy sy ny fisainana vahiny ka ny fisainana vahiny no mahery. Hono izany.
Fa ity takarivan’ny alatsinainy 5 zanvie ity dia nanaitra ny fandrenesana vaovao. Hono maromaro no re tamin’ny onjam-peo sy televiziona maromaro fa tsy iray ihany. Araho ange…
1- Tsy azo ihodivirana fa ho soloina hono ny praiminisitra. Maromaro ry zareo mpilaza vaovao no nivoy izany vaovao izany. Nanongilan-tsofina ihany aho fa tsy reko ny loharanom-baovao nahazoan-dry zareo io vaovao io. Sarom-pady koa moa ny fanomezana ny anaran’ny loharanom-baovao. Mahasaro-piaro an’ireo mpanao gazety izany.
2- Rehefa zohina indray dia samy manana ny sokajin’olona tondroina hisolo ity praiminisitra efa ambivitra ny fotoana ialany. Ao no milaza fa manam-boninahitra hono no hisolo ny praiminisitra. Ao ny namoaka anaran’olona efa ministra tamin’ny fotoan’andro nitondran’ny filoha Ravalomanana. Samy manana ny loharanom-baovaony tokoa ry zareo, hono.
3- Amin’ny 9 janoary, hono, ny fifampiarahabana tratry ny taona karakarain’ny Fiadidian’ny Repoblika. Ho tontosaina eny Iavoloha, hono. Hihena hono ny isan’ny asaina. Nasaina daholo, hono, ireo mpitondra teo aloha… Rehefa jerena anefa eny amin’ny tambajotra serasera “facebook” dia hita mifanontany ireo mpanao gazety raha efa nahita fanasana fa io 9 janoary na zanvie io tokoa ny fifampiarahabana. Marihiko fa amin’ny ora sy fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity dia mbola tsy voamarina na nodisoina fa ny 9 janoary no hanaovana ny fifampiarahabana ka mbola mijanona ho hono izany io vaovao io.
4- Manomboka ny 13 janoary, hono, ny fivoriana tsy ara-potoan’ireo depiote eny Tsimbazaza. Vaovao izay hita tamin’ny gazety mpiseho isan’andro io. Dia mba nojereko ny diariko. Ny 13 janoary anie ka ilay daty nambaran’ny Ffkm fa hanohizana ny dinika fampihavanam-pirenena nokarakarain-dry zareo e. Dia nahoana no ny 13 janoary no hanomboka ny fivoriana tsy ara-potoan’ny Antenimieram-pirenena ? Tsisy ifandraisan’ireo hono. Angamba.
5- Lasan’ny sinoa, hono, ny tany misy ny labatoara ao Ankadindratombo. Dia nantsoina ny mpanao gazety hivoy izany hevitra izany. Ny alatsinainy 5 janoary no nivoy io hevitra io ny loharanom-baovao. Ny talata 6 janoary dia efa niova indray ilay voalaza teo aloha teo. Misafotofoto ny resaka.
Santionany amin’ny honohono re eo anivon’ny fiaraha-monina ireo. Tsy hiady amin’ny mpilaza vaovao sy mpanao gazety akory ny tenako raha nitanisa maromaro avy amin’izy ireo. Fa fanairana ihany no atao. Ny honohono anie ka mety mahataraiky izay mihanahana ary ny loza dia mety hahafaty tahaka ny honahona e. Ka mba jereo ihany fa sao any ho any misy fanafody hanafoanana ny honohono fa ny tena izy no ambara. Koa samia maka izay tandrifiny ary ambava homana am-po mierotra. Matezà ny aina fa tena hiresaka isika amin’ity taona ity.
TTF : Hatreto mbola tsy nahita ny fanasana na nandre aza fa efa nozaraina izany fanasana izany. Samia velon’aina ahitana izay tena marina amin’ireo honohono ireo. Ny fisian’ny loharanom-baovao marim-pototra sy fahalalahan’ny fahazoam-baovao no fototry ny demokrasia tena izy. Manana adidy hitaky izany ny holafitry ny mpanao gazety vaovao. Mirary soa ho azy ireo.